भारतसँग सरकार ‘चुँ’ सम्म नबोल्ने, जनता सडकमा निस्कँदा किन ओठ-तालु पोल्ने ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
भारतसँग सरकार ‘चुँ’ सम्म नबोल्ने, जनता सडकमा निस्कँदा किन ओठ-तालु पोल्ने ? (भिडियो)
काठमाडौं । हाम्रै आकाशमाथि उस्को हेलिकप्टर उड्छ अनुमतिविना । नेपाली नागरिकहरु तुईन तर्दै गर्दा उस्का सुरक्षाकर्मीले साउनको भेलमा बगाइदिन्छन् । नेपाली सीमाभित्र छिरेर नेपाली नागरिकमाथि निर्घात कुटपिट गर्छन् । कहिले मानेभञ्ज्याङ भएर जल्छ त कहिले कालापानी बनेर दुख्छ । अन्याय र अत्याचारको त कुरै छाडौ । सीमा मिचिदा र सीमा भित्र छिरेर नेपाली जनताको छातीमा गोली चलाउँदा पनि सहनु परेको छ । त्यसमाथि सरकारले विज्ञप्ती जारी गरेर सारा नेपाली जनतालाई आदेश फरमान गर्छ – छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी नगर्नु । उनका पुतला पनि नजलाउनु र जुलुस प्रदर्शन पनि नगर्नु ।
नेपाली जनताले जान्दछन सम्मान गर्न । त्यो सरकारले सिकाइरहनु पर्ने कुरै होइन । छिमेकीलाई छिमेकीको जस्तो व्यवहार गर्नेलाई मान मनितो गर्न जानेकै छन् नेपाली जनताले । तर एउटा असल व्यवहार समेत नगर्ने छिमेकीलाई नेपाली जनताले कसरी लिनुपर्छ त्यो पनि मजाले जानेकै छन् । गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले महाकाली नदीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुईन काटिदिदा जयसिंह धामी साउनको भेलमा बेपत्ता भएको निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब नेपाली जनता यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी होला त्यस्को प्रतीक्षामा छन् । तर प्रतिवेदन बुझाएको दुई दिन नवित्दै त्यही जयसिंह बगेको दार्चुला जिल्लाको आकाशमा लगातार तीन दिनसम्म भारतीय हेलिकप्टरले फन्को लाइरहयो । त्यो हेलिकप्टर कहिले नेपाली सेनाको व्यारेका माथि उड्यो त कहिले त्यही जयसिंहको गाउँतिर पनि हुइकियो ।
सरकार ‘चुँ’ सम्म पनि नबोल्ने अनि जनता सडकमा निस्कदा पनि उस्को ओठ तालु पोल्ने । सुन्नुहोस् महाशयहरु , हरेक देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा र बहसमा निर्णायक भनेका जनता हुन्छन् । राष्ट्रको भाग्य र भविष्य बदल्ने शक्ति पनि जनतासंग नै हुन्छ । धेरै कालखण्डमा नेपाली जनताले नाकावन्दी जस्तो असैह्य र अमानवीय हर्कत पनि भोगे । पछिल्लो पटकको नाकावन्दीलाई नाकावन्दी होइन भन्ने दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ अहिले । चीन तिर सीमा विवाद देखाएर नयाँ नाटक मञ्चन गरेको सरकारले अब अर्को लज्जास्पद विज्ञप्ती जारी गरेर जनताको स्वाभिमानमाथि फेरि एकपटक घन प्रहार गर्ने दुस्साहस नै गरेको छ – छिमेकीविरुद्ध ठूलो स्वरमा नबोल्नु रे । आदरणीय दर्शकवृन्द दक्षिणको छिमेकी भारतको जे जस्तो ज्यादतिमा पनि अब साउती मारेर अर्थात कानेखुसी गरेर कुराकानी गर्नु पर्ने भयो । सडकमा निस्कन समेत नपाइने भयो । घर भित्रै बसेर सबै अत्याचार सहनै पर्ने भयो ।
छिमेकी मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिलाई उच्छृङ्खल र निन्दनीय गतिविधि भन्दै गृहमन्त्रालयले रिसाउनुसम्म रिसाएर विज्ञप्ती जारी गरेको छ । । मित्रराष्ट्रहरुसँगको स्वाभिमान र सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ । गरे कारवाही हुने चेतावनी पनि गृहको छ । तर गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तीमा नेपाली आकाशमा उडेका छिमेकीको त्यो हेलिकप्टर र जयसिंह धामी प्रकरणमा कहिंकतै एक शब्द खर्च गरिएको छैन ।
भारतसंग भएका असमान सन्धिको बारेमा बोल्नु पर्ने सरकारसंग धेरै विषय छन् तर एक शब्द निकाल्न सकेको अवस्था छैन । नेपालको ७१ स्थानमा ६० हजार ६ सय २० हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ । भारतसँग जोडिएका २६ वटा जिल्लामध्ये २२ वटा जिल्लाका ६२ ठाउँबाट सीमा मिचिएको छ । अवैध व्यापार, नेपाली युवतीहरूको बेचबिखन, हतियारको तस्करी, डकैती गुण्डागर्दी जस्ता समस्या त झिनामसिनामा गनिन थालिसके । अनि सहनु पर्ने के के हो सरकार ? नेपाली जनताले यी सबै अत्याचारविरुद्ध बोल्न पनि नपाउने हो भने अब बोल्दिने चै कस्ले हो ?
जयसिंह धामी वेपत्ता प्रकरणको प्रतिवेदन गृहमन्त्रायलको दराजमा सडाउन पक्कै बुझाएको होइन । यस्ता धेरै प्रतिविदेनहरु सरकारका दराजहरुमा सो पिस मात्र भएर बसेका छन् । उठाउन पर्ने धेरै विषय बाँझै राखिएको छ । सरकार पनि नबोल्ने र अनि जनता पनि चुप लाग्ने हो भने काठमाडौको भद्रकालीमाथि नै उनीहरुको हेलिकप्टर आएर फनफनी घुम्यो भने के गर्ने । सहने हो भने धेरै दृश्यहरु देख्न तयार हुनुपर्छ । नहुने भन्ने केही छैन उस्को तर्फबाट, जुन नेपाली जनताले सदियौदेखि देख्दै र भोग्दै आएका छन् ।
इतिहासमा तीनवाट क्रुर र अमानवीय नाकावन्दीको पीडा सहे नेपाली जनताले । भूपरिवेष्ठित राज्यको सामान्य अधिकारबाट पनि धेरै पटक वञ्चित भएका छन् नेपाली जनता । यो देश भित्र भएको धेरै नाङ्गो हस्तक्षेपको त कुरै छाडौं । राजनीतिक उथलपुथलमा उस्कै हात, नेपालको उन्नति र अवनतिमा पनि उस्कै साथ । आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको सत्ता सिंहदरबारमा सजाउन सक्ने हैसियत भएको उस्को हैसियत खुम्चाउने प्रयास नभएको होइन तर ठूला राजनीतिक दलहरुको लम्पसार प्रवृतिले नेपाली जनता जहिले पनि स्वाभिमान बगेको टुलुटुलु हेर्दै आउनु परेको छ । उस्को हर्कत, वानी बेहोरा र नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार नभएसम्म काठमाडौंमा मात्र होइन देशभर सडकमा असन्तुष्टि पोखिरहने छन् ।
नेपाली जनता हुन्– गर्नेलाई सम्मान गर्न पनि जान्दछन् र नगर्नेलाई त्यस्तै व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनन । यो पुर्खाको नासो हो, अहिलेका शासकहरुको परिचय होइन ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको